လက်ပံတောင်း အကြပ်အတည်း ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း | ဧရာဝတီ
လက်ပံတောင်း အကြပ်အတည်း ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
လင်းသန့်| November 26, 2012 | Hits:1
| | စီမံကိန်းအတွင်း သာသနိက နေရာများ ထိမ်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်း တောင်ကြောပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ရွှေမြင်တင် တောင်ပေါ်သို့ စီတန်းတက်ရောက်ကာ အနုမြူကပ်ကျော် စေတီတော်ကို ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူခဲ့ကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – အောင်နေမျိုး / Facebook)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရဘက်က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန် တိုက်တွန်းသကဲ့သို့ ဆန္ဒပြသည့် နည်းလမ်းတခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ဖြေရှင်းသွားသင့်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
“လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရအနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့လိုပါတယ်။ အခု ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိရင် ကြိုက်တယ်၊ မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ မရဘူး။ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ အဖြေ မထွက်ဘူး။ ကျမတို့မှာ ညှိနှိုင်းတဲ့ယဉ်းကျေးမှု ပျောက်နေတယ်။ ဆန္ဒပြ အဖြေရှာရတာထက် ညှိနှိုင်းတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။
ဖော်ဆောင်နေသည့် စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တဖက်သတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတကာ ယုံကြည်မှု ဆုံးရှုံးသွားမည်ဟုလည်း ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။
“စီမံကိန်းတွေ မဖော်ဆောင်ခင်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိဖို့လိုတယ်။ ဖော်ဆောင်နေဆဲ စီမံကိန်းတွေကို တဖက်သတ် ရပ်စဲလိုက်တာဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးသွားမယ်” ဟု အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်ပြီး “ လက်ပံတောင်းကြေးနီ မိုင်းတူးဖော်ရေး စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာချုပ်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။ တဖက်သတ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရင် လျော်ကြေးဆိုတာ ပေးရမယ်။ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာစေချင်ရင် ကိုယ့်ဘက်က ကတိကို တည်အောင် ထိမ်းသိမ်းရမယ်။ ကတိစကားတွေကို အတိအကျ လိုက်နာကြရမယ်။ ဒီလို ကတိကျိုးပေါက်လို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေး လုပ်မရဘူးဆိုတာတွေ တွေးလာကြမယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေလည်း အချိန်မရွေး ပြန်ရုပ်သိမ်းသွားနိုင်တယ်၊ နောက်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုချင်တဲ့ လူတွေလည်း စိတ်မ၀င်စားကြဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟု ဆင်ဟွာသတင်းတွင် ပြောထားသည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မီတီ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဆိုပါဒေသရှိ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရန် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသသို့ လာရောက်မည်ဖြစ်သည်ဟု မုံရွာသို့ ရောက်ရှိနေသည့် လက်ပံတောင်းအရေး လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သူ ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“အန်တီစုက ၂၉ ရက်နေ့မှာ မုံရွာကို လာမှာပါ။ မုံရွာကိုလာပြီးလို့ရှိရင် လက်ပံတောင်းတောင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် ဒီကနေ့ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဒေါ်စုက အားပေးပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောမှာပါ” ဟု သူကဆိုသည်။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြ သပိတ်စခန်းများသို့ သွားရောက်မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“ဘာကြောင့် သပိတ်စခန်းတွေကို မသွားလည်းဆိုတော့ အခု အန်တီစုက ဒေသခံ ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့မှာဆိုတော့ ဒီသပိတ်စခန်းမှာ ရှိတာတွေကလည်း အားလုံးကတော့ ဒီပြည်သူလူထုတွေပဲဖြစ်တာကြောင့် အတူတူပါပဲ” ဟု ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဆိုသည်။
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းအရေး ဒေသခံများ၊ အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတို့အကြား တင်းမာမှုများနှင့် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်း ဖြေရှင်းပေးရန် ကြားဖြတ်အဆိုကိုလည်း တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“အချက် ၄ ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေ လေးစားယုံကြည်တဲ့သူတွေ ပါဝင်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့စည်းဖို့၊ ဒီ ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်သင့် မလုပ်သင့်ကို ပြန်လည် အစီရင်ခံဖို့ရန် အတွက်ပါ။ အကယ်၍ လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကို ပြည်သူလူထုကို ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ချပြဖို့ရာနဲ့ ဒီအချက်တွေကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကနေ တိုက်တွန်းပေးဖို့ အဆိုကို ကျမတင်သွင်းခဲ့တာပါ” ဟု ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အဆိုတင်သွင်းစဉ် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က စီမံကိန်းများကို အစိုးရက ကတိကျိုးပေါက်ပြီး ရပ်ဆိုင်းမှုများ လုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုမှုများအတွက် ယုံကြည်မှု ပျက်စီးကာ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။
ယခုအခါ ဆန္ဒပြ ဒေသခံပြည်သူများ၊ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေကြရသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၊ လုပ်ငန်းဆက်လက် လုပ်ကိုင်၍ မရဖြစ်နေသည့် ကုမ္ပဏီမှလူများ အားလုံး ပင်ပန်းနေကြပြီဖြစ်ပြီး ပြဿနာကို ညှိနှိုင်း အဖြေရှာသည့်နည်းဖြင့် သွားရန်အတွက် တိုက်တွန်းမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဆက်ပြောသည်။
လက်ပံတောင်း ဒေသခံ သပိတ်ခေါင်းဆောင်များထံသို့ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ကလည်း လာရောက်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပြည်သူများ၏ လိုလားချက်များကို သမ္မတထံ တင်ပြပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
စတော့ အိတ်ချိန်း ၀င်ရန် ပြည်တွင်း ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးများ မသေချာသေးပဲလောက သိန်းသောင်းချီ အရှုတ်အရှင်း ထပ်မံ ဖြစ်ပွားကျောက်ဖြူ အထူး စီးပွားရေးဇုန် ဆောက်လုပ်ရန် ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုလျှောက်ထားမြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုလာရောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ နယူးယောက်တွင် ကျင်းပမြန်မာငွေတန်ဖိုး ဆက်တိုက်ကျပြီး ကန်တဒေါ်လာလျှင် ကျပ်တထောင်နီးပါး ရောက်ရှိ
3 Responses LeaveaReply Cancel reply
သူရဇော်ဟိန်း November 26, 2012 - 5:12 pm နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံး မြန်မာပြည်ဖက်က စောင့်နေခဲ့တာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပါ။ နည်းဥပဒေတွေ မထွက်သေးတာတောင်မှ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲဖြစ်ဖို့ရှိနေပါပြီ။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်တာကို တရုပ်ကလွဲပြီး စိုးရိမ်သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတွေကို တရုပ်ကြောက်လို့ ညှိပေးရပါတယ်ဆိုတာမျိုး ကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
စစ်အစိုးရ မှားခဲ့သမျှ ပြည်သူက ဆက်ပြီး အနစ်နာခံ တာဝန်ယူရမယ် ဆိုတာဟာ လုံးဝ တရားနည်းလမ်းမကျပါ။ ကိုယ့်ကို အဖက်ဖက်က နစ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ နဲ့ သူ့ကိုမြှောက်ပင့်ပေးကမ်းခဲ့တဲ့ တရုပ်ကို ဘယ်သူကမှ ဆက်ပြီး ပခုံး မဖက်ချင်တော့တာ အမှန်ပါ။
၀မ်ပေါင် နဲ့ ဦးပိုင် ကသာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေအတိုင်း တာဝန်ယူတတ်တဲ့ ကုမ္ပ္ပဏီတွေဖြစ်ခဲ့ရင် ပြည်သူတွေ ကလည်း ညှိပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သေခြာတာကတော့ ဒီလက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်း ရပ်သွားခဲ့ရင်တောင်မှ ထပ်ဝင်လာမဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ တားဆီးလို့ ရမှာ မဟုတ်ကြောင်းပါဗျာ။
Reply swe htwe November 27, 2012 - 12:29 am Negotiation is the best way now. We should think another factors if this project is forced to stopped. I think U Ag Min said the right thing although he should not say like that. But unity is strength and we all must realise that. Never surrender to another country how powerful he is.
Reply မောင်မောင် November 27, 2012 - 1:44 am ဒေသခံ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒုက္ခပေါင်းမြောက်မြားစွာကို လစ်လျူရှုပြီး ဦးပိုင်တစ်ခုတည်း ကောင်းကျိုးအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကတိက၀တ်တွေကို တည်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ တရားမျှတမှု မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာကို ချပြလိုက်လည်း တကမ္ဘာလုံးက အစိုးရနဲ့ ဦးပိုင်ကို ၀ိုင်းဝန်းရှုံ့ချကြမှာပဲ။
လူမဆန်တဲ့ လူတွေကို လူစိတ်ရှိတဲ့ ဘယ်လူသားကမှ အသိအမှတ်ပြု မထောက်ခံပါဘူး။ အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို မြေလှန် အရိုးရော၊ အသားပါမကျန် နွှာချင်နေတဲ့ တရုတ်ကို ဘယ်နိုင်ငံကမှ မထောက်ခံပါဘူး။
ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အပေါ်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ ကတိမတည်ဖူးခဲ့တဲ့ လူတွေက ကတိစကားတွေ ပြောနေတာ ရယ်ဖို့ပဲကောင်းတော့တယ်။
ဒီကိစ္စမှာ မီဒီယာတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ရိုးသားတာ မရိုးသားတာတော့မသိဘူး။ ဒေသခံတွေကတော့ တကယ့်အခံဖက်သက်သက်၊ သူတို့မှာ ရိုးသားမှု အပြည့်ရှိတယ်။ ဇာတ်နာလွန်းလို့သာ မမောနိုင် မပမ်းနိုင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြပေမယ့် သူတို့တွေမှာလည်း ပင်ပမ်းလှပါပြီ။
ဒီလို ကတိသစ္စာမရှိတဲ့ အချောင်နှိုက်ချင်တဲ့ စီမံကိန်းမျိုးကို မဖြစ်မနေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှ ကမ္ဘာမှာ သိက္ခာတက်ပြီး အက်ဖ်ဒီအိုင်တွေ ၀င်လာမဆဲ တစ်သဲသဲ ဖြစ်မှာသေချာလွန်းပါတယ်။